သေးငယ်သော rotary လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > Rotary လျှပ်စစ် Actuator > သေးငယ်သော rotary လျှပ်စစ် actuator
သေးငယ်သော rotary လျှပ်စစ် actuator
AOX-R ကို ကို စီးရီး သေးငယ်သော rotary လျှပ်စစ် actuaသို့r ဖြစ် အသစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဘို့ အထူးသဖြင့် သေးငယ်သော အလုံး & ပလပ်ဂ် အဆို့ရှင် နှင့် damper auသို့mation.AOX ယူ ကြီးမားသော အရေးပါပုံ သို့ ကော်ပိုရိတ် လူမှုရေး တာဝန်။ ကျွန်တော်တို့ ဆက်လက် သို့ ရှာအံ့သောငှါ အခွင့်အလမ်း ဘို့ တိုးတက်မှု, မျှဝေခြင်း နှင့် တိုးတက်ရေး နှင့် ကျွန်တော်တို့၏ မိတ်ဖက် နှင့် cusသို့mers. တွင် ထို့အပြင်, အားလုံး ကျွန်တော်တို့၏ AOX-R ကို ကို စီးရီး သေးငယ်သော rotary လျှပ်စစ် actuaသို့r ထုတ်ကုန် နှင့် န်ဆောင်မှုများ များမှာ hနှင့်led ဖြတ်. cusသို့mer-centric စီမံခန့်ခွဲမှု, ပေးကမ်းခြင်း အဆိုပါ ကြီးမားသောest ဦးစားပေး သို့ cusသို့mer satဖြစ်faction.
mounting Flangeï¼က ISO 5211ï¼ï¼ F04 / F05 / F07 / F10 / F12 / F14 / F16
1. ခိုင်မြဲသောချေးယဉ်အိမ်ယာ: AOX-R ကိုစီးရီး၏ shell ကိုသေးငယ်တဲ့ rotary လျှပ်စစ် actuator anodic ဓာတ်တိုးကုသမှုနှင့် polyester အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူ, လူမီနီယံအလွိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ IP68 optional ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်ခိုင်မာတဲ့ချေး-ခံနိုင်ရည်နှင့်ဝင်း IP67, NEMA4နဲ့6ဖြစ်ပါတယ်။
2. စက်မှုန့်သတ်ချက်ဝက်အူ: AOX-R ကိုစီးရီးသေးငယ်တဲ့ rotary လျှပ်စစ် actuator ၏စက်မှုန့်သတ်ချက်ဝက်အူကဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောခရီးသွား, ကျော်ထံမှ actuator တားဆီး, ချိန်ညှိဖြစ်ကြသည်။
3. Long ကဝန်ဆောင်မှုဘဝကို: Precise ဒီဇိုင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများလျှပ်စစ် actuators turn AOX-R ကိုလေးပုံတစ်ပုံအဘို့အမြင့်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုဘဝအာမခံပါသည်။
AOX-R ကိုစီးရီးသေးငယ်တဲ့ rotary လျှပ်စစ် actuator ရဲ့အထက်နဲ့အောက်အဖုံးအဆစ်တစ်ခွက်-ခုံးဖွဲ့စည်းပုံမှာချမှတ်နှင့်အတွင်း pad ပါတဲ့ဆီလီကွန်အို-လက်စွပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါတံဆိပ်ခတ်စွမ်းဆောင်မှုအားကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ဝန်ဆောင်မှုဘဝရှည်လျားသည်နှင့်အိုမင်းလွယ်ကူသည်မဟုတ်, နှင့်အမြင့်ဆုံး IP68 အောင်မြင်နိုင်ပါသည်, ထိုအသွင်အပြင်လှပသောဖြစ်ပါတယ်။
ပိုကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ AOX-R ကိုစီးရီးသေးငယ်တဲ့ rotary လျှပ်စစ် actuator ဖော်ပြရန်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏လူကြိုက်များမြှင့်တင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတက်ကြွစွာဂျာမဏီ Valve လောက, AHEMA, ရုရှား PCV ကုန်စည်ပြပွဲ, ECWATCH, မလေးရှား ASIA မှရေအတွက်, အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာအဓိကပြပွဲများတွင်ပါဝင် ထိုင်း THAIWATER, အင်ဒိုနီးရှား Indowater, ရှန်ဟိုင်း Flowtech, etc.You သမျှသောဤပြပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
1. AOX-R ကိုစီးရီးသေးငယ်တဲ့ rotary လျှပ်စစ် actuator နှင့်အဆို့ရှင်ကိုစနစ်တကျ install နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီ။
2. အဆိုပါပြုပြင်တာတွေ screw နှစ်ခု, ဆက်သွယ်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်တည်နေရာလျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုအစိတ်အပိုင်းများကိုတင်းကျပ်လျက်ရှိသည်။
3. မြေပြင်နှင့် equipotential Bond စနစ်တကျအကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်။
5. အဆိုပါအရင်းအမြစ်ထောက်ပံ့ရေးဗို့အားအစဉ်မပြတ် nameplate အပေါ်ဖြစ်နှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုရွေ့လျားသို့မဟုတ်ရွေ့လျားရမည်ဖြစ်သည်။
6. AOX-R ကိုစီးရီးသေးငယ်တဲ့ rotary လျှပ်စစ် actuator နှင့်အဆို့ရှင်နဂိုအတိုင်းဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦးက: ကအထူးကအကြောင်း 3-5 ရက်အတွင်းကြာစိတ်ကြိုက်လျှင်ငါတို့ရှိသမျှသည်, စတော့ရှယ်ယာရှိအဆိုပါပုံမှန်အစည်းအဝေး AOX-R ကိုစီးရီးသေးငယ်တဲ့ rotary လျှပ်စစ် actuator ။
Q: ပြီးနောက်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပေးပို့သင့်ရဲ့ quotation အများနှင့်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုခံယူနိုငျသောအခါငါသည်သင်တို့၏ AOX-R ကိုစီးရီးသေးငယ်တဲ့ rotary လျှပ်စစ် actuator စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပါက?
တစ်ဦးက: အားလုံးသင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင် 24hours အတွက် replied လိမ့်မည်။
ဖြေနမူနာအလို့ငှာ3များအတွက် ~ 7days ကျနော်တို့ 15 ရက်အတွင်းကတိပေးပုံမှန်အစည်းအဝေးမိန့်အဘို့အဘယ်သူမျှမ problem.And ဖြစ်လိမ့်မည်။
hot Tags:: သေးငယ်သော rotary လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်